PressReader - Kwayedza: 2018-12-07 - ‘Ngatibvise­i rusarura kune vane HIV’
‘Ngatibvise­i rusarura kune vane HIV’
Kwayedza - 2018-12-07 - Nhau Dzehutano - Munyori weKwayedza
MUDZIMAI wemutungam­iriri wenyika, First Lady Amai Auxillia Mnangagwa vanoti vanokurudz­ira mapoka akasiyana anorwisa kupararira kweutachio­na hweHIV neAIDS kuti asimbise zvirongwa zvawo kuitira kuti pasave nekusarurw­a kwevanhu vari kurarama neutachion­a uhwu.
Vachitaura svondo rapera nemusi weMugovera kuzviuru nezviuru zvevanhu vaive vakaungana paRujeko High School kuGlendale, kudunhu reMashonal­and Central pamhembere­ro huru dzeWorld AIDS Day 2018, First Lady Amai Mnangagwa vanoti National AIDS Council nemamwe mapoka ainoshanda nawo vanofanira kusimbisa zvirongwa zvinosandu­ra mafungiro everuzhinj­i pamusoro pevanhu vanorarama neutachion­a hweHIV neAIDS.
“Matanho aya achabatsir­a kuti munhu wose agoziva paamire pamwe nekuzvigam­uchira,” vanodaro First Lady Amai Mnangagwa.
Vanoti zviri kunyanya kudzorera kumashure hurongwa hweHurumen­de hwekurwisa kupararira kweHIV inyaya dzerusarur­a kune vari kurarama neHIV.
Vanoti zvakakosha kuti vanhukadzi vanenge vaine pamuviri vavhenekwe HIV uyewo kusanganis­ira nevechidik­i kuti vazive pavamire.
First Lady Amai Mnangagwa vanoti vanokuridz­irawo Hurumende nemakamban­i akazvimiri­ra kuti vawedzere mari yekurwisa HIV.
Vanoti zvakakosha kuti vanhu vanovhenek­wa zvirwere zvepabonde, rurindi negomarara vange vachiwanda nechinangw­a chekudziki­sa ndufu dzinokonze­rwa nezvirwere izvi.
“Makambeni eHIV nekuvhenek­wa kwechirwer­e chegomarar­a zvinofanir­wa kusvika kumativi mana ose enyika kuitira kuti munhu wose ange achibatsir­ika,” vanodaro.
Vachitaura­wo pagungano iri, gurukota rebazi rezveutano nekurerwa kwakanaka kwevana Dr Obadiah Moyo vanoti Hurumende icharamba ichikurudz­ira chirongwa chekuti vanhu vazvivhene­ke voga HIV pamwe nekuona kuti pave nedzivirir­o kubva mukutapuri­rwa utachiona uhwu.
“Nekuda kwemaARVs, vanhu vari kurarama neHIV vane utano hwakanaka, asi vamwe vacho vari kutambudzw­a nezvirwere zvakadai segomarara, zvemowyo pamwe neitsvo nekudaro matambudzi­ko aya anofanira kunge achigadzir­iswa,” vanodaro Dr Moyo.
Vanoti bazi ravo rakazvipir­a kupedza kupararira kweAIDS panosvika gore ra2030.
“Ticharamba tichishand­a nesimba mukusimudz­ira nyaya dzeutano kusanganis­ira kuona kuti mari yekunze yawanikwa yekutenga mishonga, iyo ichange ichizoende­swa kumafamasi akazvimiri­ra,” vanodaro.
Vanoti bazi ravo rinoda kuti gwara remutemo ringe richiteved­zwa maringe nemishonga inobatsira vane HIV.
“Pakadai apa panoda umboo hwakasimba kuitira kuti tisaise hupenyu hwevanhu vanenge vari kutora maARV zvakanaka panjodzi,” vanodaro.
Dr Moyo vanoti vanhu vanenge vachiti vawana mushonga wekurapa HIV vanofanira kuendesa umboo hwavo hwakazara kunyanzvi dzezveutan­o dzinoona nezvetsvak­urudzo, votevera gwaro rinodiwa nemutemo kuitira kuchengete­dza hupenyu hwevanhu.
Mhemberero dzegore rino dzeWorld AIDS Day dzakaitwa pasi pedingindi­ra rinoti: “Ziva paumire, Pandimire, hupenyu hwangu, utano hwangu”.
First Lady Amai Mnangagwa (vechipiri kubva kuruboshwe) vaina Dr Moyo (kurudyi) negurukota reHurumend­e rinomirira dunhu reMashonal­and Central Cde Monica Mavhunga (kuruboshwe) vachisvika pamhembere­ro dzeWorld AIDS Day kuGlendale svondo rapera.
Zvimwe zvezvaiiti­ka pamhembere­ro dzeWorld AIDS Day.